တိုက်ပွဲသဏ္ဍာန်ကို အုပ်စိုးသူတွေက ပြဌာန်းပေးလေ့ရှိတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးပါ ကျနော်တို့တပ်ရင်းက ရဲဘော်တွေစုထုတ်တဲ့ ကဗျာစာအုပ်မှာ ထည့်သွင်း ဖေါ်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ အမှတ်တရရှိသွားတာနဲ့ ဒီမှာ ပြန်တင်ကြည့်တာပါ
လက်ကို မ မိ၊ လက်ကြားကိုကြည့်
တောက် ... ဆေးလိပ်သောက်ချင်တယ်။
Posted by ဖိုးညို at 3:38 AM5comments:
သူတို့ စစ်ပွဲက ပြန်လာခဲ့ကြတယ်
ပြီးတော့ သူတို့ ဆရာကန့်ဆီလာကြတယ်
ဆရာကန့်မှာ အလွမ်းတွေနဲ့ဆိုတာ သူတို့မသိကြဘူး။
အဲဒီ အသက်ဘေးက လွတ်တဲ့အခါ ရယ်စရာ မောစရာတွေအဖြစ်
ဆရာကန့်မှာ အလွမ်းတွေနဲ့ဆိုတာ သူတို့မသိကြဘူး။
ဆရာကန့်မှာ အလွမ်းတွေနဲ့ ဆိုတာ သူတို့မသိကြဘူး
Posted by ဖိုးညို at 11:37 PM 1 comment:
မင်းစကားသံတွေက ဝဲလို့။ (၁)
ကိုယ့်နှလုံးသားရဲ့ ဘာသာစကားပါ။ (၂)
(ဒါပေမယ့် … ဒါဟာလည်း)
မင်းမြင်ခွင့် ရစေချင်တယ်။ (၄)
အဲဒီ … ငွေ့ရည်တွေနဲ့
ကဲ … ပြော
ရဲရဲရင့်ရင့် ပွင့်နေပုံ။ (၂)
ငါ ရပ်လို့။ (၁)
အလွမ်းတွေ ရွာနေပေါ့။ (၄)
တမြေ့မြေ့ ငါတို့လွမ်းကြ။ (၅)
အချစ်ချည်းသက်သက် ။ (၃)
(၃) ညိုထက် (လမ်းသစ်ဦး)
(၅) ပွင့်သစ် (ကရိန်ကန်)
Posted by ဖိုးညို at 3:53 AM 1 comment:
ကျနော် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် ငြိမ် သက်စွာငေးမောနေသည်။ အမိုးပြော နေသည့် စကားလုံးတိုင်းက ရင်ကို စူးစိုက်နေသည်အလား။ “မိုးဦးအကျ စောမယ်ဆိုတာကလည်း တကယ်တော့ လောကဓံတွေပါလား အမေရယ်” ဆရာချောနွယ်၏ ကဗျာ စာသားများက ရင်ကို နာနာကျင်ကျင် တို့ထိလျက်ရှိသည်၊ ဟုတ်ပါသည်။ အမိုးပြောနေသည့် အကြောင်းအရာများက အကြွေစောသည့် ပန်းငုဝါလေးတွေအကြောင်း။
အမိုး၏စကားသံများက လောကဓံနှင့် အရင်းနှီးကြီး ရင်းနှီးနေသူ၏ လေသံများအတိုင်း တည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်အတူ လေးပင်ပြတ်သားခြင်းတို့ ရှိနေသည်။ ကံကြမ္မာကို ရိုးမယ်ဖွဲ့နေတာလား၊ ဘုရား သခင်ရဲ့ အလိုတော်အတိုင်းလို့ ဖြေသိမ့်နေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဘာဆိုဘာမှ စဉ်းစားမနေချင် တော့တာလား၊ သူမက ဘယ်လိုခံစားနေရသလဲ ဆိုတာကို ကျနော်က ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်နေ ဖြစ်သည်။
ရဲဘော်ထူးအောင်ကတော့ စကားလုံးတွေကို စတင်နားလည်ကာစ ကလေးတယောက်လို သူပြောမည့် စကားများအတွက် အပြန်ပြန်အလှန်လှန် စဉ်းစားရင်း “သူ ... ကျသွားတယ်ဆိုတာကတော့ တကယ်ပါပဲ အမိုး” အသူတရာနက်သော ချောက်ထဲသို့ ထိုးဆင်းကျရောက်သွားသည့် စက္ကန့်နာရီများ၊ ထိုင်နေသူ အားလုံးဆီ တပြိုင်နက် အန်ကျလာသည့် သက်ပြင်း လှိုင်းပုတ်သံများ၊ ထိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း သွေးလေရပ်တန့်သွားသည်ဟု ခံစားလိုက် ရသည်။ ဒီဖြစ်ရပ်ကို သိနေကြသူတွေ ဖြစ်ကြပေမယ့် ဒီစကားတွေ ပြန်ကြားရတော့ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားရသည်က အမှန်၊ အထူးသဖြင့် စနစ်ဆိုးကြီးက ဝါးမြိုခြင်းဒဏ် ခံထားရသည့် မိခင်တယောက်ရှေ့မှာ သားတယောက်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို အတိုရှင်းဆုံး စကားလုံးတွေနဲ့ ဖွင့်ဆိုပြနေရသည်က တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားမှုနယ်ပယ်ကို ကျယ်သည်ထက် ကျယ်ဝန်းစေသည်။
“ရဲဘော်ဆေးရေ ... ရင်နှင့်အမျှ ကြေမွ နေကြရကုန်ပြီဗျာ”
သူရဲ့မြန်မာအမည်က ‘ဆန်းလင်းအောင်’ ဒါပေမယ့် သူက ကရင်လူမျိုး။ စောဆေးကိုလို ကျနော်တို့ အားလုံးကတော့ သူ့ကို ‘ရဲဘော်ဆေး’ လို့ပဲ ခေါ်တယ်။ သူနဲ့ ကျနော် ကျောင်းသားတပ်မတော် (၆ဝ၁) တပ်ရင်းသို့ ရောက်ခဲ့ကြသည်က ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်။ ပြည်မြို့ လူဘောင်သစ် ပါတီဝင်။ အလံ (၃) လက်ကို ကြံ့ခိုင်သူ။ အမှတ် (၆ဝ၁) တပ်ရင်း၏ ၁၉၉၂ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်အတွင်း ၃/၈ လုပ်ဟန်အရ လူထုနဲ့အတူ တည်ဆောက်ခဲ့သူ။ သူတို့မြို့သား အဆိုတော် ကိုခင်ဝမ်းရဲ့ ပြည်မှာဆောင်းကို ဆွတ်ပျံ့ဖွယ် တီးခတ် သီဆိုတတ်သူ။
“သြော်...အနေဝေး၊ ရေဝေးမှာ ပြည်မှာဆောင်းကို ဆုံးရှုံး သွားခဲ့ပါပေါ့လား၊ ရဲဘော်ဆေးရယ်” သူက စိတ်လိုလက်ရ ဖြစ်တဲ့အခါ ကဗျာရေးလေ့ရှိတယ်။
သူရဲကောင်းဝါဒ ကျဆုံးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း
ဇွဲ ရှိသူတွေသာ အောင်ပွဲခံမှာပေါ့။
နှင်းရည်တွေ သိုင်းဝိုင်းနေတဲ့ ရှမ်းရိုးမရဲ့ည မီးပုံနံဘေးမှာ သူကိုယ်တိုင် ရွတ်ပြခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ကဗျာလေး။ အခုတော့လည်း လွမ်းရစေတော့ ရဲဘော်ဆေး ရေ။
သူက ဟာသဓာတ်လည်း ရှင်သန် ထက်မြက်နေတဲ့သူ။ အခြေခံဒေသ ထိုးဖောက်ရေး ထိုးစစ်ခရီးမှာ ကျွန်တော်တို့ အတူတကွ ချီတက်ခဲ့ကြ သူရဲကောင်းဆန်စွာ ကျဆုံးခဲ့ရ။ သူရှိရင် မငြီးစတမ်း။ သူ့ ပြည်မြို့ရဲ့ ဟာသအကြောင်းတွေ။ သူနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အမြီးအမောက် မတည့်တဲ့ ရယ်စရာဖြစ်ရပ်တွေ။ သူရဲ့ စက်မှုအထက် တန်းကျောင်းသား ဘဝဖြစ်စဉ်။ အမှုန့်ကြိတ် စက်ရုံအလုပ်သမားဘဝ။ လူ့ဘောင်သစ် ပါတီဝင်အဖြစ် စွန့်စားခန်းတွေ။ ငတ်ပြတ်သူတွေ။ ပြည်မြို့ရဲ့ အာဇာနည်နေ့ လွမ်းသူပန်း ခွေချပွဲ သည်းထိတ်ရင်ဖို နိုင်ငံရေးထိုးစစ်။ နောက်တော့ သူ့မိသားစုအကြောင်း။ အဖေရယ်၊ အမိုးရယ်၊ သူရယ်၊ သူ့ညီလေးရယ်။
“အေးဗျာ ... ကျနော် တောခိုလာတော့ ညီလေး တော်တော်ခံစားရမှာ ပဲ”
“ဟုတ်တယ် ဖိုးခွား ... အငယ်ကောင်လည်း ဆုံးသွားပြီ။ အမိုး အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သူ့အဖေလည်း ဆုံးသွားပြီ”
ဒါဟာ မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်မှုလား။ မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့် စိတ်တွေဟာ အရက်မူးသမားလိုမျိုး ယိမ်းယိုင်ပြီး ဆောက်တည်ရာ မရ ဖြစ်နေသည်။ ရဲဘော်ဆေး ပြောပြဖူးသည့် သူ့မိသားစုဘဝ ပုံရိပ်များက အပ်ချည်ကြိုးတစကို တဘက်က ကိုင်ထားရင်း အပ်ချည်ကြိုးလုံး ပြုတ်ကျသွား သလိုမျိုး ဝရုန်းသုံးကား ပြုတ်ကျလာသည်။
“အဖေနဲ့ အမေက နယ်မြေလုရင်း ကျနော်တို့ ၂ ယောက် ငယ်ငယ်ကတည်းက အတူမနေဖြစ်ကြတာဗျ”။
အမိုးရယ် လောကဓံဆိုတာ ရှစ်ပါးထက် မပိုဘူးဆိုပေမယ့် အမိုးအတွက်တော့ ပြင်းထန်လှချည်လားဗျာ။ ဘယ်လို ဖြစ်ရတာလဲ အမိုးရယ်။ ထောက်လှမ်းရေးတွေကလည်း အိမ်ကို ခဏခဏ လာမေးနေတယ်။
‘ဆေးကိုလို တောခိုသွားပြီး သိပ်မကြာဘူး။ သူ့အဖေက အိပ်ယာထဲ လဲတော့တာပဲ။ သူ့အဖေက နဂိုကတည်းကလည်း ကျန်းမာရေး သိပ်ကောင်းလှတာ မဟုတ်တော့။ ဆုံးသွားရှာတယ်။ သူဆုံးခါနီး သူသားကြီးကို သိပ်တွေ့ချင်ရှာခဲ့တယ်။ ဟင်း ...’
အမိုးဟာ ရှည်လျားစွာ စကားပြော နိုင်ဖို့အားယူတာလား။ ဒါမှမဟုတ် နာကျင်စိတ်တွေ လိပ်တက်လာလို့လား မသိ။ သက်ပြင်းတခုချပြီး ဆေးပေါ့လိပ်ကို ကောက် ဖွာလိုက်တယ်။ အနုမြူပြာလဲ့နေတဲ့ မီးခိုးငွေ့များကို ကြည့်ရင်း ကျနော့်စိတ်တွေ အနုမြူဗုံးဒဏ်သင့်နေပြီလားလို့ တွေးမိတယ်။ တကယ်တော့လည်း ဗမာတပြည်လုံးဟာ အနုမြူရောင်ခြည်တွေ လွှတ်ထားပြီး အဆိပ်သင့်နေတဲ့ လှောင်ချိုင့်ကြီးနဲ့ အတူတူပဲ မဟုတ်လား။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ အသက်ရှူသံ မျှဉ်းမျှဉ်းလေးတွေကိုတောင် ကြားနေရတဲ့အထိ တိတ်ဆိတ်စွာ အမိုးကို ကြည့်နေကြတယ်။ အဲဒီ တိတ်ဆိတ်မှုကြီးဟာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ တိတ်ဆိတ်မှု ကြီးပါပဲ။
အဲဒီအချိန်က အိမ်မှာ သူတို့အဖွားရယ်၊ အဒေါ် အပျိုကြီး နှစ်ယောက်ရယ်၊ အငယ်ကောင်ပဲ ကျန်ခဲ့တယ်။ သူ့ဦးလေး တယောက်ရှိပေမယ့် သူက ရန်ကုန်မှာ။ တခါတလေမှပဲ ပြည်ကိုရောက်လာလေ့ရှိတယ်။ သူ့ဦးလေးကိုတော့ အငယ်ကောင်က ကြောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အပျိုကြီး အဒေါ်တွေကိုတော့ နည်းနည်းမှ ကြောက်ဘူး။
အဒေါ်တွေကလည်းဆုံး အဖေက လည်းဆုံး၊ အကိုကလည်း တောထဲမှာကျဆိုတော့ မဆူရက်၊ မပြောရက်၊ ပိုက်ဆံကလည်း တောင်းသလောက်ရနေတော့ အငယ်ကောင်က ပျက်စီးလာတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အရက်နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးက အရမ်းပေါတယ်။ အငယ်ကောင်က အပေါင်းအသင်းမှားပြီး ဘိန်းဖြူ စွဲသွားတယ်။
အမိုးဟာ ပြောလက်စ စကားကို ရပ်ပြီး မီးခြစ်လိုက်ရှာနေသည်။ မီးခြစ်ကို တွေ့သောအခါ မီးခြစ်ပြီး ဆေးလိပ်ကို မီးညှိ၏။ အမိုးရယ် အဲဒီ မီးခြစ်ထဲက မီးခတ် ကျောက်လိုမျိုး ကျနော့် နှလုံးသားတွေ ပဲ့ကျ နေရပါတယ်။ အမိုးက ဆေးလိပ်ကို အားပါးတရရှိုက်ဖွာပြီး မီးခိုးများကို မှုတ်ထုတ်လိုက်၏။
အမိုးရဲ့စိတ်တွေက ထိုမီးခိုးများလို အုံ့မှိုင်း ရှုပ်ထွေးနေပေလိမ့်မည်။
“သူ့အဒေါ်တွေက သူ့ဦးလေးဆီကို လှမ်းအကြောင်းကြားပြီး ဆေးဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။
ဒါပေမယ့် သူကလက်မခံဘူး။ သူ ဆေး မဖြတ်ချင်တော့ဘူးတဲ့။ သူ ဆေးဖြတ်လိုက်ရင် အခုဖြစ်နေတဲ့ သူ့ဘဝကိုသူ ဘယ်လိုမှ ရင်ဆိုင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့၊ သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေသွားတာ မြင်ချင်ရင် ဆေးဖြတ်ပေးကြလို့ ပြောတယ်။ အင်း ... ခုတော့လည်း ဘိန်းဖြူနဲ့ပဲ ဆုံးပါးသွားရတာပါပဲ။”
အမိုးနှင့် ကျွန်တော်တို့ ဆုံမိကြသည်က ညီလာခံကာလ၊ အမိုးက တယောက်တည်း စိတ်ကူးတဲ့ရာ သွားလာနေထိုင်ရင်း စိတ်ကိုဖြေကြည့်ဖို့ ကြိုးစားနေသည်မှာ ကြာပြီ။ အခု ရောက်လာသည်က ရဲဘော်ဆေးကို ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေတာ တွေ့ရသည်ဟူ၍ သတင်းကြားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုသတင်းကို အမိုးက မယုံသော်လည်း အဒေါ် အပျိုကြီးနှစ်ယောက်က အတင်း လွှတ်သောကြောင့် စုံစမ်းရင်း၊ မေးမြန်းရင်း ကျနော့်ဆီ ရောက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ အမိုးက အရာရာကို မတုန်မလှုပ် ရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ရှိနေပေမယ့် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေ ရသူတွေက ကျွန်တော်တို့။
“အင်း ... သူတို့ အဖွားကိုတော့ ဆေးကိုလို ကျသွားတာ ပြောမပြရဲဘူး၊ သူ့အဖွားက အကြီးကောင်ကို ပိုချစ်တယ်။ အခုတော့ ပိုဆိုးသွားတာပေါ့၊ သားလည်း ဆုံး၊ မြေးအငယ်ကလည်းဆုံးဆိုတော့ ဆေးကိုလိုအကြောင်း နည်းနည်းမှ မဟရဲဘူး။ သူ့အဖွားကတော့ သူ့မြေးကြီး ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ပဲ ထင်နေတာ။”
အမိုးက ရှည်လျားစွာ ရှင်းပြပြီး၊ ငေးရင်းမောရင်း ဆေးလိပ်ကိုသာ တွင်တွင် ဖွာ နေတော့သည်။ အမိုးက ဗလာနယ်ထဲ လွင့်ကျသွားတာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ မှာလည်း အမိုးပြန်ရင် သူ့မြေး ပြန်အလာကို မျှော်နေမယ့် အဖွားဆီ သတင်းစကား ပါးလိုက်စရာ ဘာမျှမရှိတော့ပြီ။
“ရဲဘော်ဆေးရေ ရင်နှင့်အမျှ ကြေမွ နေရပါပြီဗျာ”။
[ဆေးကိုလိုမိုးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်များ အမှတ်တရ]
Posted by ဖိုးညို at 6:51 AM 1 comment:
စနေရဲ့ကျောကုန်းပေါ် ပစ်တင်ထားတဲ့ ကဗျာကိုပဲ
ဒီတိုင်းပြည်က ဘ၀တွေရဲ့ တိုက်ပွဲဟာ
ရှင်ကြီးဂေါတမလည်း ဖြစ်ဖို့အတွက် ဖြတ်ခဲ့ရတာပဲ။
ငါအရေးနိမ့်နေပြီလို့ တွေးခဲ့မိရင် …။
တံခါးကို ခေါက်လော့ ပွင့်လိမ့်မည်
Posted by ဖိုးညို at 8:11 PM2comments:
စစ်မြေပြင် ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ယူထားသည့် ရဲဘော်များပြန်ရောက်လာကြပြီ။ သူတို့ထွက်သွားတာ တောင် ရက်အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပြီပဲ။ တိုက်ပွဲတခုဖေါ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထောက်လှမ်းနေတာဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ တပ်စုမှူးဖြစ်သူ ရဲဘြော်ကီးကြွေနှင့် မဟာမိတ် ရလလဖ (ရှမ်းပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံ လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့)မှ တပ်စုမှူး ဗိုလ်လေးထွန်းတို့ဆီတန်းသွားသည်။ သတင်းထူးမည်ထင်သည်။ ရဲဘော်အားလုံးက ကိုကြွေကြီးပြန်အလာကို စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်မျှော်နေကြသည်။ သူတို့စကားပြောနေကြသည်က အကြာကြီး။ အားလုံးက အဖြေကိုသိချင်နေကြသည်။ လည်တဆန့်ဆန့်။ ထိုအထဲတွင် စိတ်လှုပ်ရှားမှု အပြင်းထန်ဆုံးက ကျနော်နှင့် ရဲဘော်ထူးအောင်။ ဟုတ်သည်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်က လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို ရောက်ရှိလာသည်မှာ မကြာသေး။ စစ်သင်တန်း ဆင်းခဲ့သည်မှာလည်း မကြာသေး။ အခြေအနေကောင်း၍တိုက်ပွဲဖေါ်ဖြစ်ပါကဤပွဲသည် ကျတော်တို့ကျောင်းသားများကို ဓါးကို ဓါးခြင်း၊ လှံကို လှံခြင်း ရင်ဆိုင်သွားမည်ဆိုသည့် ရန်သူစစ်အုပ်စုအပေါ် ပထမဦးဆုံး လက်တုန့်ပြန်ရမည့်ပွဲ။ ထိုင်မရ။ ထမရ။ ထိုအချိန် ဗိုလ်လေးထွန်းက သူ့ရဲဘော်တယောက်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီး ကျတော်တို့ရှိရာကိုပြရင်း တစုံတခု ပြောနေသည်။ ထိုရဲဘော်ရောက်လာပြီး ပြောလိုက်သည့်စကားက တန်ဖိုးရှိပါဘိ။ “တပ်စိတ်ကေဒါတွေ ဆွေးနွေးပွဲတက်ဖို့ ခေါ်တယ်” ကျနော်တို့အားလုံး တိုင်ပင်မထားပဲ “ဟေး”ခနဲ့ အော်ဖြစ်သွားမိသည်။ ကိုကြွေကြီးက ရှူတည်တည်လှမ်းကြည့်မှ မျက်နှာပိုးသပ် သေနတ်ဖြုတ်ပြီး တိုက်နေလိုက်ရသည်။ သေချာသွားပြီ။
ကျနော်တို့ တောခိုလာတော့ တပ်ရင်းနောက်တန်းကိုရော။ ဗဟိုနောက်တန်းစခန်းကိုပါမရောက်။ ထိုအချိန်က တပ်ရင်းတရင်းလုံးကလည်း ရှေ့မှာ။ စစ်သင်တန်းကိုပင် လပဒတ (လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု) ဗဟိုစခန်းတွင် တက်ရောက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဗဟိုစခန်းက စခန်းသေမဟုတ်။ ပြောက်ကျားစစ် သေနင်္ဂဗျူဟာနှင့်အညီ ရွေ့လျားပြောင်းလဲ နေသောစခန်း။ မှတ်မှတ်ရရ ထိုစဉ်က လပဒတဗဟိုက “လွယ်ဖီ တောင်တန်း”ပေါ်မှာ။ စစ်သင်တန်းပင် မတက်လိုက်ရပဲ ရန်သူ့စစ်ကြောရေးမှ ရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်တွေကြောင့် ကွယ်လွန်သွားသည့် ရဲဘော်ကြီး နိုင်မိုးအောင်ကိုဤတောင်တန်းပေါ်မှာပဲ ထားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
စစ်သင်တန်းပြီးသည်နှင့် တပ်စိတ်များနှင့်တွဲရသည်။ နောက်တော့ မဟာမိတ် စစ်ကြောင်းများနှင့်အတူ နယ်မြေရင်းနှီးမှု။ လူထုရင်းနှီးမှုရရှိရေးအတွက် စစ်ကြောင်းထွက်ကြသည်။ ထိုခရီးက နယ်မြေလေ့လာရေး ခရီးဖြစ်သလို နိုင်ငံရေးခရီး။ စည်းရုံးရေးခရီးလည်း ဖြစ်သည်။ နယ်မြေစုံသည့်အခါတွင်မှ ရလလဖ - အမှတ် (၁) တပ်ရင်း လှုပ်ရှားဒေသကို တပ်စုမူး ရဲဘော်ကြွေဦးဆောင်သော တပ်စိတ်တစိတ်လိုက်ပါသွားရန် တာဝန် ပေးသည်။ ဤခရီးကတော့ နယ်မြေလေ့လာရေးခရီး မဟုတ်တော့။ တိုက်ခိုက်ရေးအမိန့်ပါ ထည့်ပေး လိုက်သည်။ ကြည်လင်အေးမြသည့် ပွန်ချောင်းကိုဖြတ်ပြီး အရှေ့ဘက်ကမ်းကို သွားနေသူများက တက်ကြွလန်းဆန်း နေကြသည်။ တိုက်ခိုက်ရေးအမိန့် ရခဲ့ပြီကိုး။ ကျနော်တို့အစုအဖွဲ့တွင်ပါဝင်ကြသူများက တပ်စုမှူး ရဲဘော် စိုးမိုကြင်(ကိုကြွေ)။ တပ်စိတ်မှူး ရဲဘော်စံလှ။ ဒုစိတ်မှူး ရဲဘော်ပီလီ။ ဆေးမှူး မင်းမောင်မောင်။ ရဲဘော်ဝင်းလှိုင်။ ရဲဘော်ဖွတ်။ ရဲဘော်ထူးအောင်နှင့် ကျနော်။ အနောက်ဖက်ကမ်းမှာ ကျန်ခဲ့သူများကတော့ မအီမသာ။
တပ်ရင်း (၁) ဂွင်။ ပွန်ချောင်း။ လွယ်မောတောင်နှင့် မဲနယ်တောင်တို့ကားကျန်ခဲ့ပြီ။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ MTA/ UWSA နယ်မြေများနှင့် နီးကပ်သွားပြီဖြစ်သည်။ ရှမ်းရွာတွေကများသည်။ တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ချိန်က ဖြတ်လေးဖြတ်ဒဏ်ကို အကြီးအကျယ် ခံထားရသည့် ရွာတွေ။ တချို့ရွာတွေက ယခုမှ ပြန်လည်ထူထောင်ကာစ။ ရွာနှင့်မတူ။ ဒျှုသည်စခန်းတွေနှင့် ပှိုတူသည်။ အစစ ချို့တဲ့လွန်းလှသည်။ လူထုဆင်းရဲလျင် ကျနော်တို့လည်း ဆင်းရဲသည်။ ရှမ်းပဲပုတ်ဆိုသော်လည်း ပဲပုတ်မရှိ။ လူလေးယောက်အတွက် ပဲပုတ်နှစ်ချပ်ကို ထောင်းပြီး ရေချိုးပေးလိုက်သည်။ ထိုပဲပုတ်ရေကျဲသည် ဟင်း။ ရွာအများစုက ကြက်သွန်ဖြူစိုက်ကြသည်။ စားစရာ ဘာမှမရှိတော့သောအခါ ကြက်သွန်ဖြူတွေကို ထောင်းပြီး ဟင်းချက်စားကြသည်။ အနံက မွှန်ပြီး အရသာက စပ်ဖျင်းဖျင်း။
နောက်တော့ မဟာမိတ်ပင်မစစ်ကြောင်းက လူထုလုပ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ရန် ထွက်ခွာသွားသည်။ ကျနော်တို့နှင့်အတူ ဗိုလ်လေးထွန်းတို့တပ်စု။ ထိုအစုအဖွဲက အင်မတန်ညီသည်။ တပ်မှူးတွေလည်း လူငယ်တွေ။ အပြန်အလှန် နားလည်မှုလည်း ရှိကြသည်။ အစုအဖွဲ့က လူမများတော့လို့ထင်။ တယောက်ခြင်း ရင်းနှီးမှုလည်း အတော်ကလေးရကြသည်။ အစုအဖွဲ့ ရင်းနှီးမှုအပြင် လူထုနဲ့လည်း အတော်လေး ရင်းနှီးနေပေပြီ။ နယ်မြေအနေအထားကိုလည်း အတော်ကလေး တွက်ချက်နိုင်လာပေပြီ။ နယ်မြေခံဖြစ်သည့် ဗိုလ်လေးထွန်းတို့တပ်စုကလည်း အင်မတန်မြေပိုင်သည့်ရဲဘော်တွေ။ လက်နက်ဖွဲ့စည်းပုံကလည်း ကောင်းသည်။ ကျနော်တို့ အစုအဖွဲ့တွင် M 23 စက်လက်ပါသလို ဗိုလ်လေးထွန်းတို့ တပ်စုတွင် RPG2နှင့် M 79။
ထိုအချိန်ကတည်းက ရန်သူသတင်းကို မပြတ်စုံစမ်းနေခဲ့သည်။ သိပ်တော့မကြာ။ သတင်းရပြီ။ နမ့်ဆမ် ကားလမ်းပေါ်က လမ်းကင်း။ ကိုယ့်အင်အားနှင့်ဆိုလျင် ရန်သူကို ချေမှုန်းရေးပင်လုပ်နိုင်သည်။ ဒေသခံလူထုက လည်း ကူညီရန်အသင့်။ လူရွေးပြီး အခိုင်အမာအချက်အလက် ထောက်လှမ်းစုံစမ်းရန် လွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု သူတို့ ပြန်လာကြပြီ။
ကျနော် သေနက်တိုက်ပြီးလို အစိတ်အပိုင်းများ ပြန်လည်တပ်ဆင်နေစဉ်မှာပင် ကိုကြွေနှင့် ကိုစံလှတို့ ပြန်လာကြသည်။ ရဲဘော်အားလုံးကို စုရန်ပြောသဖြင့် သေနက်ကိုအမြန်ဆင်လိုက်ပြီး သူတို့နှင့် ၀င်ထိုင် လိုက်သည်။ ရည်မှန်းထားသည့် လမ်းကင်းကို တိုက်မည်။ အပေါ့ပါးဆုံးဖြစ်စေရန် မလိုအပ်သောပစ္စည်းများကို ထားခဲ့ကြမည်။ ညပိုင်းချီတက်မည်။ အသံမမြည်စေရန် အီးကွေးမန့်ကို ပြင်ဆင်ထားရမည် --- စသည် အခြေအနေ၊ အချက်အလက်နှင့် စုရပ်၊ စုံရပ်၊ စကားဝှက်တို့ကို ပြောကြားသည်။ ရဲဘော်များကား ခဏအတွင်းမှာပင် ထမင်းချက်သူ။ ပစ္စည်းသိမ်းသူ။ အီကွေးမန့်ပြင်သူတို့နှင့် ရှုပ်ထွေးသွားကြ၊ မျက်နှာတွေက ၀င်းပ။
တညလုံး ချီတက်ခဲ့ကြရသည်။ ရွာတွေကို ကွင်းပြီးရှောင်ခဲ့ရသဖြင့် ခရီးက ပမ်းလွန်းလှသည်။ သို့သော် ကျနော်တို့အားလုံး ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ရလျင်ရ၊ မရလျင်ချ။ မရ၍ချကြမည်။ ထိုစိတ်ဓါတ်က ကျနော်တို့ကို နတ်ဖမ်းစားသလို ဖမ်းစားထားသည်။ လမိုက်ညအမှောင်ထုအတွင်းထဲမှာ အလဲလဲ၊ အကွဲကွဲဖြင့် ချီတက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်နေရာကို သုံးနာရီခွဲလောက်မှ ရောက်သည်။ အလင်းက ပြိုးတပျပျ။ ပါလာသည့် ထမင်းထုတ်များကို ဖြေ၍စားသူများက စားနေကြပြီ။ ကျနော်တို့ကတော့ မောပန်းမှုကြောင့်ရော။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပါ မစားနိုင်။
ပြီး --- တိုက်ပွဲအတွက်နေရာချကြသည်။ မူလက ကားလမ်းဘေးရှိ ကုန်းကလေးတခုတွင် နေရာ ယူရန်ဖြစ်သော်လည်း အစီအစဉ်ပြောင်းလိုက်သည်။ ကျနော်တို့ရောက်နေသည့်နေရာက မိုးနဲ – မောက်မယ် ကြားမှ ကားလမ်း။ ထိုကားလမ်း. တဖတ်တချက်ပိုင်ဆိုင်မှုက လမ်းတောင်ဖက်ပိုင်းသည် ရလလဖ။ မြောက်ဖက် က MTA။ ကုန်းကလေးတည်ရှိနေတာက မြောက်ဖက်မှာ။ ဆုတ်လမ်းမကောင်း။ ဒါ့အပြင် ထိုကုန်းကလေးမှာ မကြာခဏရန်သူကိုစောင့်ပြစ်လေ့ရှိသည့်နေရာ။ ရန်သူအာရုံစိုက်သောနေရာ။ ထိုနေရာကိုရှောင်ပြီး ခပ်လှမ်း လှမ်းရှိ နေရာတခုကိုရွေးလိုက်သည်။ ထိုနေရာက ကားလမ်းထက်တော့နိုမ့်သည်။ မျက်ကွယ်ကောင်းသည်။ ရန်သူအာရုံစိုက်သည့်နေရာမဟုတ်။ အစုအဖွဲ့တခုကို စက်တလုံးနှင့်အတူ ရှေ့ကြိုလွှတ်ထားသည်။ ရန်သူ လာလျင် ကြိုသိနေရန်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့က ကားလမ်းအတိုင်း နေရာယူလိုက်ကြသည်။ ကျနော်က ကိုကြွေနှင့် ကိုစံလှကြားမှာ။
သတ်မှတ်နေရာ။ ပြစ်ပိုင်နက် ကိုယ်စီသက်မှတ်ပြီး ကိုယ်နေရာမှ ကိုယ်ငြိမ်သက်ပြီးနေကြသည်။ မကြာမီ ရွာသားများ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန် ကားလမ်းအတိုင်းထွက်လာကြသည်။ ကျနော်တို့က သူတို့ကို တွေ့နေ သော်လည်း သူတို့က ကျနော်တို့ကို မတွေ့ရန်လိုသည်။ ပုလိုင်း။ ပေါက်ပြား။ ကျောင်းသွားသူတချို့။ အချိန်များက တဖြေးဖြေးကုန်။ အလင်းက အမှောင်ထုကို ကျော်တက်လာပြီ။
လမ်းကိုလည်း မျက်ချည်မပျက်ကြည့်ရင်း စက်ကိုင်ထားသည့် တပ်မှူးကိုလည်းကြည့်နေကြရသည်။ ရှေ့ကြိုလွှတ်ထားသည့် အစုအဖွဲ့က သတင်းပို့မည်မဟုတ်လား။
ရှမ်းပြည်၏ နံနက်ခင်းက အေးလွန်းလှသည်။ ထိုအအေးနှင့် ကျနော်တို့၏ စိတ်လှုပ်ရှားမှု ပေါင်းပြီး ခံစားနေရတာက တမျိုးတမည်။ ကိုယ့်သေနတ်ကိုယ် စုတ်ချည်။ ဖြန့်ချည်။ တိုက်ပွဲ။ ပစ်ရင်မှန်အောင် ပစ်တယ် ဆိုသော ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကို တည့်တည့်မှန်အောင် ပစ်ရတော့မည့် တိုက်ပွဲ။ ကိုယ့်လက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ သေနတ်နဲ့ မိစ္ဆာတို့၏ ၀ိဉာဉ်ကိုနှုတ်ရပေတော့မည်။ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မြင်ကွင်းတွေက ပျိုးတပြတ်ပြတ်။ ကျနော်တို့က လက်စားချေတုန့်ပြန်ရေးသမားတော့ မဟုတ်။ သမိုင်းကြွေးတော့ တောင်းရပေမည်။ တိတ်ဆိတ်ခြင်းက ကြီးစိုးနေသည်။ တိတ်ဆိတ်စွာ တိုက်ပွဲခေါ်နေကြခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်၏ တိတ်ဆိတ်မှုက ကျယ်ပြန့်လှ၏။
တပ်စုမှူးဖြစ်သူနှင့် မလှမ်းလှသောကြောင့် စက်သံတရှဲရှဲကို မသဲမကွဲကြားနေရသည်။ ထိုစဉ် စက်ထဲမှ အသံပေါ်လာ.။
ထိုသတင်းပို့ချက်က အားလုံးထံ လက်ဆင့်ကမ်း ရောက်သွားသည်။ အားလုံး ခေါင်းထောင်သွားသည်။ ရန်သူရောက်နေပြီ။ လှုပ်ရှားမှုတိုင်း ရင်နှင့်အမျှ။ သမိုင်းကြွေး။ အတွေ့အကြုံသစ်။ ကျနော့်ရဲ့ စစ်ဦး။ လက်တကမ်းအကွာ။ ကားသံကို ကြားနေရ။ ရင်ခုန်သံကို ကြားနေရ။ သေနက်ကို ကိုင်ထားတဲ့လက်က ပိုမိုတင်းကြပ်လာ။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး။ ချေဂွေဗာရား။ ၀င်းမော်ဦး။ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်။ အံကြိတ်။ ဆေ့ဖြုတ်။ သေနက်ကို တင်းတင်းပိုက်ထား။ ကားသံ။ ပြီးနီးကပ်လာသည့် ကားသံ။ ကားသံ --- ကားသံ --- ပြီးတော့ --- သေနက်သံ။ ကျနော်တို့၏ ပွိုင့်အဖွဲ့က ပစ်လွှတ်လိုက်သည့် သေနက်သံ။ နောက်တော့ ဆိတ်ငြိမ်စွာ စောင့်နေသူများ ဆီမှထွက်လာသည့် သေနက်သံများ။ သေနက်သံများနှင့်အတူ ကားသည် ကျနော်တို့နှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် ထိုးရပ်သွားသည်။
ကားရပ်သွားသည့်နေရာနှင့် ကျနော်နေရာယူထားသည့် နေရာကမဝေး။ ကားကနှစ်စီး။ ကားရပ်သွားသည်နှင့် ယူနီဖောင်းဝတ်များ လွှားကနဲ ခုန်ဆင်းနေကြသည်။ တချို့ လမ်းပေါ်ကို တလိမ့်ခေါက်ကွေး။ ကားထဲ ပြန်လန်ကျသွားသူများ။ ကျနော်က အကုန်မြင်နေရသည်။ ကားထဲတွင် အထွေးလိုက်ရှိနေသည်ကို မြင်နေရသည်။ ကျနော့်သေနက်ကို ရှေ့က ကားထဲထိုးချိန်ပြီး ပစ်ချထည့်လိုက်သည်။ ကျနော့် သေနက်ထဲက ကျည်ထွက်သွားသည့် အသံနှင့်အတူ ယမ်းကန်သည့်အရသာကို ခံစားလိုက်ရသည်။ တင်းကြပ်နေသည့် ခံစားမှုနေရာတွင် ပေါက်ကွဲခြင်းတွေက အစားထိုးဝင်လာသည်။ သေနက်နှင့်အတူ ကျနော်လည်း ပေါက်ကွဲနေသည်။ အံကိုတင်းတင်းကြီတ်ကာ တတောင့်ခြင်းပစ်ထည့်နေလိုက်သည်။
ကျနော်တို့ အစစအရာရာလက်ဦးမှု ရနေသည်။ ရန်သူ လုံးဝအလစ်အငိုက်မိသွားသည်။ ကျနော်တို့ကို လုံးဝပြန်မပစ်နိုင်။ တတောင့်ခြင်းပစ်နေရာမှ ကျနော့်အမြင်တွေဝါးလာသည်။ မှန်သည်။ ကျနော် မျက်ရည်များ ကျနေသည်။ ကတ္တရာလမ်းပေါ်က မြင်ကွင်းက ရှစ်ဆယ့်ရှစ်နှင့် ပြောင်းပြန်။ ဟိုတုန်းက လမ်းပေါ်မှာ ကျနော်တို့ အပစ်အခက်ခံခဲ့ရသည်။ အခု အဝေးပြေးလမ်းမမှာ သင်းတို့ကို သမိုင်းကြွေး ပြန်တောင်းနေရပြီ။ ကတ္တရာ လမ်းပေါ်မှာ သေနေသူတွေ။ ဒဏ်ရာရနေသူတွေ။ သေနက်မှန်ပြီး လန်ကျသွားသူတွေ။ အော်ဟစ် နေသူတွေ။ ကျနော်တို့ အောင်ပွဲခံနေသည့်မြင်ကွင်းကို ကျဆုံးသွားရသူ ရဲဘော်သူငယ်ချင်းတွေကို မြင်စေချင် နေသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အဖိနှိပ်ခံခဲ့ရသူ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေကို မြင်စေချင်နေသည်။ ကျနော်တို့ အောင်ပွဲသည် လူထုအောင်ပွဲ။ ကျနော်တို့အောင်ပွဲသည် သမိုင်း၏ အောင်ပွဲ။
အောင်ပွဲခံ သေနက်သံတို့က တောလုံးညံနေသည်။ ကျနော်တို့. ပစ်ခတ်သံတို့က ကမြိာံပတော်လဲသံလို တုန်ဟည်းနေသည်။ အဖိနှိပ်ခံအားလုံးအတွက် ကိုယ်စားပြုနေသည့် သေနက်သံတွေ။ ဖက်ဆစ်တို့. ၀ိဉာဉ်တွေကို ခေဋ္ဌချနေသည့် ကျည်ဆံတွေ။ ကျနော်တို့ပစ်လွှတ်လိုက်သည့် ကျည်ဆံတွေထဲကို ကျဆုံးသူတို့၏ ၀ိဉာဉ်တွေ ခိုတွဲပါဝင်နေသလား။ ကျနော်ကတော့ ထိုအတိုင်းပင် ယုံကြည်နေသည်။ ကျနော်၏ စစ်ဦးတိုက်ပွဲက အောင်ပွဲ၏ တံပိုးခရာသံတို့ဖြင့် ခြိမ့်ခြိမ့်ညံနေတော့သည်။ မှန်သည်။ ကြားနေရသည့် သေနက်သံတို့က ဘိသိပ်မင်္ဂလာမှာ ပုဏားဖြူ။ ပုဏားညိုတို့ မှုတ်သည့် ခရုသင်းသံ အလား ---။
(မှတ်ချက်။ ။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် ဒုရင်းမှူးတဦးအပါအ၀င် ရန်သူ ၁၁ ဦးကျဆုံးခဲ့သည်။)
Posted by ဖိုးညို at 5:19 PM No comments:
ဒီနေရာက ကျနော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားဂွင် “အထူးဒေသ” ရဲ့ အခြေအစပ်၊ ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့များ စစ်ကစာှးု ကောင်းသည့်နေရာတော့ မဟုတ်၊ ဒေသအနေအထားအရကိုကလည်း စစ်ရေးအခေါ်အရ “ရန်ဝင်။ ငါဝင်ဒေသ”၊ ရန်သူ့စိုးမိုးဂွင် မြေပြန့်နှင့် မိမိတို့ခြေကုတ်ဒေသတို့ ထိစပ်နယ်မြေ၊ ဤနေရာကို ရောက်လာခဲ့ကြသည်က အလုပ်အဖွဲ့ငယ်တခုဖြစ်သည့် ရဲဘော်ထူးအောင်နှင့် ကျနော်၊ ထို့အပြင် ရွာသားတချို့၊ ကျနော်တို့အဖွဲ့တွင် ထူးထူးခြားခြား မှတ်တိုင်တခုကို ထမ်းထားသည်၊ ထိုမှတ်တိုင်တွင် ရေးထားသည်က …
အသက် (၃၈) နှစ်
၃၀ – ၉ – ၉၅
ချောင်းကလေးက သာမိတိုက်ရွာဖြစ်သည့် သာစည်ရွာကလေးကို ၀ိုက်ခွေပြီး စီးဆင်းနေသည်၊ ကျနော်တို့ ရွာထဲသို့မ၀င်၊ ကွင်းကွေ့ပြီး ချောင်းကိုဖြတ်ကျော်ကြမည်၊ ချောင်းဖြတ်၍ပြီးသည်နှင့် တွေ့ရမည့်လမ်းက အရေးကြီးသည်၊ ၆ ပေလမ်း၊ ထိုလမ်းမျိုးက စစ်သုံးမြေပုံတွင်ပါသောကြောင့် ရန်သူ့ စစ်ကြောင်းများ အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် လမ်း၊ လက်ဆင့်ကမ်း သတင်းစနစ်အရတော့ ရန်သူရှင်းသည်၊ သို့သော် ပေါ့၍မရ၊ ရှေ့မှာရှိနေသည့်ဒေသက ကိုယ့်ဒေသမဟုတ်၊ ရုတ်ချည်းရောက်လာလျင် တုန့်ပြန်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားရမည်၊ လမ်းကိုတွေ့နေရပြီ၊ သတိနှင့်ရှေ့ကို မျှော်ကြည့်သည်၊ ထူးခြားမှုမရှိ၊ လမ်းကို အပြေးဖြတ်ပြီး တောစပ်သို့ တိုးဝင်လိုက်ကြသည်၊ ရွာသားတယောက်ရှေ့တက်လာသည်၊ သူက နေရာသိသူ၊
သွားနေရသည်က တောထဲတောင်ထဲကိုပင် နောက်ဖေးပေါက်က ၀င်နေရသလိုမျိုး၊ တောကိုတိုး။ တောင်ကိုဖြတ်၊ ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းကြားမှာ၊ ရောက်ပြီ၊
သူရဲကောင်း၊ တော်လှန်တဲ့သူရဲကောင်းဝိဥာာဉ် ကိန်းဝပ်ရာမြေပုံမို့မို့၊ တောင်ဆင်ခြေလျောမှစီးဆင်းသော ရေစီးကြောင်းများကြောင့် မြေပုံအနေအထားပင် ပျက်လု့ပျက်ခင်၊ မနည်းရှာယူရသည်၊ ကြေကွဲစရာ၊ တော်လှန်သော အညတရ သူရဲကောင်း. မခမ်းနားသော အာဇာနည်ဗျွိာန်၊ ဟုတ်သည်၊ မခမ်းနား၊ အမြင်မခမ်းနား၊ လုံးဝကို အမြင်မခမ်းနား၊ သို့သော် မဟာပထ၀ီမြေသားထုလို သိပ်သည်းသည့်ကြီးမြတ်မှုတွေကတော့ ထည်ဝါခမ်းနားလွန်းလှသည့် တောကြိုအုံကြားကမြေပုံ၊ ဆို့နစ်သောခံစားမှုက ကျနော့်တကိုယ်လုံးကို ဖြစ်ညှစ်ပြစ်နေသလို၊
ဦးစွာ မြေပုံကို ပြုပြင်ရဦးမည်၊ ပါလာသည့် ပေါက်တူးဖြင့် မြေပုံကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်သွားအောင် ပြုပြင်ကြသည်၊ ထို့နောက် မှတ်တိုင်ကို ခေါင်းရင်းဘတ်နေရာတွင် အသေအချာစိုက်ထူပေးသည်၊ ၀ါးခုတ်ပြီး မြေပုံကို ကာရန်ပေးလိုက်ကြသည်၊ တိရိစာန်များ မဖြတ်ဆီးမိစေရန်၊ စည်းရိုးအပြင်မှနေပြီး ရေဆင်း ကောင်းအောင် မြောင်းပေါက်ပေးလိုက်ကြသည်၊ ဒေသခံရွာသားများကလည်း သူ့မြေပုံပြုပြင်ရာတွင် စိတ်အားထက်သန်စွာ လုပ်ပေးခဲ့သည်၊ မှန်သည်၊ သူသည် လူထုအကျိုးအတွက် ရန်သူ၏ လူမဆန်စွာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက် သက်ဖြတ်မှုကို ရင်စီးခံခဲ့သူ၊ နီးစပ်ရာ တောပန်းများကိုဆွတ်ခူးပြီး မဟာသူရဲကောင်း. မြေပုံပေါ်မှာ ခင်းဖြန့်ပေးကြသည်၊
လေးပင်သော အလေးပြုရန် အမိန့်ပေးသံ၊ လေးပင်သော လက်တင်အလေးပြု လှုပ်ရှားမှုများ၊ လေးပင်သော သက်ပြင်းချသံများ၊
သူနှင့် ကျနော် စတင်တွေ့ဆုံဖြစ်ကြသည်က ဆရာဒဂုန်တာရာ ကဗျာဖြင့် ပန်းချီရေးခဲ့သည့် မဲနယ်တောင်မှာ၊ ထိုအချိန်က မဲနယ်တောင်တွင် ကျောင်းသားတပ်မတော်က အလုပ်အဖွဲ့တဖွဲ့ ရှိနေသည်၊ ထိုအထဲတွင် သူလည်းပါသည်၊ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ခဲ့သည့် ထိတွေ့မှုတွင် ဒဏ်ရာရထားသော ရဲဘော် (၂)ဦးလည်း ရှိနေသည်၊ ရဲဘော်အောင်ဒင်နှင့် ရဲဘော်မိုးကျော်၊ ကျနော်တို့ရဲ့ တောအ၀င်ခရီးကို လှိုက်လှဲမှုဖြင့် နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုကြသည်၊ သူထိုအချိန်က တပ်စိတ်မှုးတာဝန်နှင့်အတူ ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ကိုပါ တွဲယူနေသည့် အချိန်၊ ကျနော်တို့ရောက်သည့်နေ့မှာပင် နောက်တန်းသို့ သတင်းပို့သည်၊
“ညီနောင်အားသစ် ကျောင်းသားနှစ်ဦး ရောက်ရှိ”
ထိုအချိန်ကတည်းက စတင်ခဲ့သော သူနှင့် ကျနော့်ကြားက ဆက်ဆံရေးတွင် အဖုအထစ်မရှိခဲ့၊ ကျနော်တို့ကြားတွင် ရိုးရှင်းသော တကြောင်းသွားဆက်ဆံရေးသာ ရှိခဲ့သည်၊ သူနှင့် ကျနော်က ညီရင်းအကိုတွေလို နေခဲ့ကြသူတွေ၊ ကျနော်က အင်မတန် အမေးအမြန်းထူသည်၊ မသိတာ။ မရှင်းတာ။ မကြေညက်တာရှိလျင် နှေးနေ။ တွေနေတာတွေမရှိ၊ ချက်ချင်းပင် တဲ့တိုးမေးလေ့ ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ပင် သူက ကျနော့်ကို “မောင်လူမွှေး”ဟု ခေါ်ခဲ့သည်၊ သူကတော့ သူ့ကိုယ်သူ “မောင်လူအေး” ယခုတော့ ကျနော့်ရဲ့ မောင်လူအေးလည်း မရှိတော့ပြီ၊ ကျနော်တွင်လည်း မသိတာ။ မရှင်းတာ။ မကြေညတ်တာရှိလျင် ယခင်ကလို တဲ့တိုးမေးတက်တဲ့ အလေ့က ပျောက်သလောက်ပင်၊ နိုင်ငံရေးလောကဓံတွေကြားမှာ “ဗေဒါပျံ အံခဲ”ခဲ့ရတာတွေက တနင့်တပိုးရှိခဲ့ပြီ မဟုတ်လား၊
သူက လူချစ်။ လူခင်အင်မတန် များသည့်လူဖြစ်သည်၊ သူရဲ့ရိုးရှင်းပြီး မာန်မာနကင်းစင်သည့်ပုံရိပ်နှင့် စိတ်ရှည်သည်းခံတက်သည့် အရိပ်သြဇာတို့က ကျနော်တို့အပေါ် လွမ်းမိုးခဲ့ပုံရသည်၊ တပ်ရင်းတွင် အဆိုးဆုံးရဲဘော်များပင် သူ့တပ်စိတ်ရောက်လျင် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဖြစ်သွားလေ့ရှိသည်၊ ရဲဘော်များက သူ့ကိုကြောက်၍မဟုတ်၊ သူက အာဏာပြ၍ ရဲဘော်ထိမ်းသည့်နည်းကို ဘယ်တော့မှ မသုံး၊ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပညာပေးလေ့ရှိသည်၊
သူ့မျက်နှာက သုန်သုန်မှုန်မှုန် ရှူတည်တည် မရှိ၊ အင်မတန်လည်း စိတ်ဆိုး စိတ်တိုခဲသည့်လူ၊ စံပြရဲဘော်ဖြစ်ရေးအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့သလို။ အခြားရဲဘော်များကိုလည်း တောင်းဆိုသူ၊ အားပေးကူညီ ထိမ်းကြောင်းပေးလေ့ရှိသည့်သူ၊ အနစ်နာခံရေးမူကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးသူ၊ ဝေဖန်ရေးလည်း ညင်သာသူ၊
သူ အရက်သောက်သည်ကို ကျနော်တကြိမ်သာ တွေ့ဖူးသည်၊ ထိုတကြိမ်သည်လည်း မှတ်မှတ်ရရ၊ ၁၉၉၄၊ အတာသင်္ကြန်ပွဲ၊ တောခိုပြီးကတည်းက သင်္ကြန်ကို နောင်ကောင်ကီမှာညကံလိုက်။ ပွန်ချောင်းမှာ ညကံလိုက်။ လွယ်ဖီမှာ ညကံလိုက်။ မဲနယ်တောင်ခြေမှာ ညကံလိုက်၊ ရန်သူနှင့် စစ်ကစားနေရသည့် နေရာများတွင်သာ ဆုံဖြစ်ကြသည်၊ လွတ်လပ်သော မိမိနယ်မြေ နောက်တန်းစခန်းမှာ ညကံရသည်ကွှအကြိမ် ပထမ၊ ဖြစ်ချင်တော့ ဗဟိုဒေသ၊ ပွဲလည်းရှိနေသည်၊ ပြဇာတ်။ သံချပ်။ သီချင်းသီဆိုမှု။ ယိမ်းအက...စသည်၊ ထိုပွဲတွင် ရဲဘော်များသုံးစွဲရန် တပ်ရင်းမှူးက မုန့်ဖိုးပေးသည်၊ တယောက် ၅ ဘတ်၊ ၅ ဘတ်ရသည်ကိုပင် ကျနော်တို့မှာ ပျော်မဆုံး၊ ညနေရောက်တော့ အလျှိုလျှို၊ သောက်တက်သူများရော။ မသောက်တက်သူများပါ သံလွင်ကမ်းဘေးက ကျောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာ၊ ထိုအချိန်က ကျနော်ရောသူပါ မသောက်သူများစာရင်းဝင်၊ ကျနော်တို့ မသောက်တက်သူများချည်း ၀ိုင်းဖွဲ့သည်၊ ပြီးတော့ သင်္ကြန်ပွဲသို့ ချီတတ်ကြသည်၊ ထို့နောက် ကျနော်တို့ ကကြသည်၊ ကွေးနေအောင် ကကြသည်၊ ကကြရင်း ပို၍မူးလာပြီး နှစ်ယောက်စလုံး ထိုးအန်လိုက်ကြတော့သည်၊ ပြီးတော့ ချာချာလည်၊ ရဲဘော်များကတွေ့ပြီး ၀ိုင်းဝန်းပြုစုကြ၍သာ တော်တော့သည်၊ နောက်နေ့မှသိရတာက ကျနော်တို့နှစ်ယောက် “We are the World” ကို ကဗျာလွတ်ဆိုရင်း ထိုးအန်သွားကြတာ ဆိုပဲ၊
သူ့ကို ရဲဘော်များက “အမေကြည်”ဟု ချစ်စနိုး ခေါ်ကြသည်၊ ဟုတ်လည်း ဟုတ်သည်၊ သူက လှုပ်ရှားပဲဖြစ်ဖြစ်။ အထိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အိပ်ရာစောစောထပြီး တပ်စစ်ဆေးမှုလုပ်သည်၊ ပြီးလျင် တပ်စိတ် ရဲဘော်များကို လိုက်နှိုးပြီး stand by အနေအထားပြင်ခိုင်းသည်၊ သူနှင့် ရဲဘော်တချို့က မီးမွှေးပြီး ထမင်းချက်ဖို့ပြင်တော့သည်၊ ပါးစပ်ကြီးဟပြီး ထမင်းကို စိတ်ဝင်တစားချက်နေသည့် သူပုံက ရယ်လည်း ရယ်ချင်စရာ၊ ပြီး...သူ့ကို ၀ိုင်းကူချက်ပြုပ်နေသူများထဲတွင် ကျနော်တို့လို ရဲဘော်ငယ်များပါလာလျင် စစ်ရေး။ နိုင်ငံရေး ဆုံးမမှုများကို ပြောနေလိုက်သေးသည်၊ ထိုမြင်ကွင်းကို တွေ့ရဖန်များလာသောအခါ ထိုအမည်တွင်သွားတော့သည်၊
သူ့အမည်ရင်းက “ကိုကြည်ဆန်း”၊ ပြည်မြို့သား၊ ငယ်စဉ်က စစ်တပ်အ၀န်းအ၀ိုင်းထဲတွင် နေခဲ့ဖူးသည်၊ မှော်ဘီ တပ်ဝင်းထဲတွင်၊ သူ့အဖေက မေမြို့စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် (၁) ကျောင်းဆင်း၊ မဆလခေတ်တွင် နှစ်တချို့သာတာဝန်ယူခဲ့ပြီး နှုတ်ထွက်ကာ ပြည်မှာအခြေချခဲ့သည်၊ မဆလ အညှိုးသိုခံရသူ စစ်အရာရှိ၊ သူ၏ အကိုသည်လည်း ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ မတိုင်မီလေးမှာတင် မဆလမှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်မှ သတင်းအစအနမရ၊ နောက်နှစ်တချို့ကြာမှ သိရသည်က ထောင်အနှစ် ၂၀ ချလိုက်သည်ဟူ၍။ ထပ်သိရသည်က သူတို့၏ မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပင် စစ်အုပ်စု နှောက်ယှက်မှုကြောင့် အခြေရိုင်နေရသောအနေအထား၊ လူထုအတွင်းမှာကတော့ သူရဲကောင်းမိသားစုဝင်များ၊
သူက လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီဝင်၊ ပြည်မြို့ကိုရောက်ဖူးသော လူ့ဘောင်သစ်ပါတီဝင်တိုင်း သူ့အိမ်တွင် စားဖူး။ သောက်ဖူး။ နေဖူးကြသူချည်းပင်၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို ခေါင်းအေးအေးဖြင့် ပါဝင်နိုင်ခဲ့သူ၊ ရှစ်လေးလုံး တိုက်ပွဲ။ စက်တင်ဘာ သဘောတူညီချက်။ ၁၉၈၉ ပြည်မြို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ရှေ့ အာဇာနည်နေ့ လွမ်းသူပန်းခွေချပွဲ။ ဒီချုပ် – တစည စီးချင်းထိုးမူ။ မေ – ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး။ ၂/၉၀ ဖီဆန်ရေး။ သာဓုကန်အစည်းအဝေး။ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး၊
ပြည်မြို့သားတို့ထုံးစံအတိုင်း ခင်ဝမ်း။ မောင်ချောနွယ်နှင့် ကိုဆွေတို့အတွက် အလွန်ဂုဏ်ယူတက်ပြီး ပြည်မြို့၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်တွေအဖြစ် ပြောလေ့ရှိသူ၊ ယခုတော့ သူကိုယ်တိုင်သည်ပင် ပြည်မြို့ရဲ့ဂုဏ်ထူးဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့သည်ကို သိမသွားခဲ့သူ။ အနုပညာကိုမြတ်နိုးသူ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ရံခါကဗျာဖန်တီးတက်ပြီး တပ်ရင်းမှထုတ်ဝေသော ကဗျာစာအုပ်များတွင် ရေးသားခဲ့သူ။ တော်လှန်ရေးကို ထွက်ခါနီး စက်မှုကျေးလတ်တွင် ဆရာဒဂုန်တာရာအား ၀င်ရောက်ဂါရ၀ပြုခွင့်ရခဲ့သည်ကို တသသပြောတက်သူ၊
ကျနော်တို့တပ်ဦး နုစဉ်ဘ၀က ကိစ္စလေးတခုရှိခဲ့ဖူးသည်၊ ၁၉၈၈ ကတည်းက လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို ရောက်နေသူများနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ (လဘသ၊ ဗကသ...စသည်)မှ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို ကူးပြောင်းလာသူများကြား စစ်ရေးသက်သက်။ နိုင်ငံရေးသက်သက်ဟူ၍ အချင်းပွားခဲ့ကြသည့် ကာလတခု ရှိခဲ့ဖူးသည်၊ ထိုကာလကို ကျော်လွားရန်ကြိုးစားသည့် ဖြစ်စဉ်တွင် သူ၏ တရားပြည့်မှုနှင့် နိုင်ငံရေး စိတ်ရှည်မှုများက တပ်ရင်းအတွင်း အရေးပါအရာရောက်ခဲ့သည်၊
သူက ကျနော်တို့တပ်ရင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီမှလာသူများထဲတွင် ထူးခြားစွာ စစ်ရေးကိုစိတ်ဝင်တစားရှိသူ။ တပ်ကိုင်ကောင်းသူအဖြစ် တပ်ရင်းက အသိအမှတ်ပြုကြသည်၊ ထို့ကြောင့်လည်းပဲ ကျနော်တို့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို ၀င်ရောက်ကြသည့်အခါတွင် သူက စစ်သင်တန်းမှူးပင်ဖြစ်နေပြီ၊ ထို့ကြောင့် သူက ကျနော်၏ ရဲဘော် ရဲဘက်သာလျင်မက ဆရာလည်း ဖြစ်သည်၊ သူ သင်တန်းပေးခဲ့သည်က တပ်ရင်းတွင်း သင်တန်းသာလျင်မဟုတ်၊ လ ပ ဒ တ(လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု) မှပေးသော ကေဒါ သင်တန်းတွင်လည်း စစ်သင်တန်းမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်သည်၊
သူက ထင်းခွေ၊ ရေခပ်၊ ထမင်းချက်။ ရိက္ခာရှာသည့် အသေးစိတ်လုပ်ငန်းမှသည် ပေါ်လစီရေးရာဆွေးနွေးမှုအထိ စိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်လေ့ရှိသည်၊ ကျနော်တို့တပ်များ လှုပ်ရှားစစ်ထွက်လျင် ကိုယ့်ရက္ခာ ကိုယ်သယ်ကြ ရသည်၊ အခြေခံရျှိာများဖြစ်သည့် ဆန်။ ဆီ။ ဆား။ ဟင်းချိုမှုန့်...စသည့်၊ ထိုအထဲတွင် အလေးဆုံးက ဆန်၊ ကျနော်တို့ အီကွေးမန့်ခါးပတ်တွင် လုံချည်ကို ဖြတ်ချုပ်ထားသော ဆန်ကြိုးရှိသည်၊ ခရီးဝေးလျင် ဝေးသလို ၂၄ ဗူးအထိလွယ်ရသည်၊ စစ်ကြောင်းနားသည့်နေရာရောက်လျင် ထိုဆန်ကြိုးထဲမှ ဆန်ယူပြီးချက်သည်၊ ခရီးကဝေး။ တောင်တွေကိုတတ်ရနှင့် ဆန်ကြိုးက လေးသောအခါ အတော်မလွယ်သည့်ကိစ္စ၊ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် သူက အခြားရဲဘော်များ၏ ဆန်ကို အရင်ယူသည်၊ နောက်ဆုံးမှ သူ့ဆန်ကြိုးကို အသုံးပြုသည်၊ ထိုသို့ အသေးစိတ်မှ စပြီး စည်းရုံးရေးမူကို ကျင့်သုံးသည့်သူ၊
၁၉၉၃ - ရလလဖနယ်မြေတွင် မကဒတ၏ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်မိတ်ဆက်နှင့် လူထုစည်းရုံးရေးခရီးအဖြစ် ပအို့ဝ် ကျေးရွာများကို လှည့်လည်ကြစဉ်ကလည်း တပ်ရင်းမှချမှတ်ထားသော လူထုအား အကူအညီပေးရေးလုပ်ဟန်ကို မောပန်းနေသည့်ကြားမှ ရဲဘော်တိုင်းနှင့် ရင်ဘောင်တန်းလုပ်နိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်၊ လုပ်လည်း လုပ်နိုင်ခဲ့သည်၊ ထိုသို့ဖြင့် ကျနော်တို့အကြား နားလည်မှု တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြသည်၊
သူနှင့် ကျနော် နောက်ဆုံးသွားခဲ့ရသည့်စစ်ကြောင်းခရီးက ဗဟိုလုံခြုံရေးတိုက်ကင်းထွက်သည့် ခရီးပင်၊ သိပ်မကြာ သူနှင့် ရဲဘော်ဆေး အလယ်ပိုင်းဒေသ အခြေခံဒေသထိုးဖေါက်ရေးတပ်ဖွဲနှင့်အတူ လိုက်ပါရန် တာဝန်ပေးအပ်ခံရသည်၊
အဖြစ်အပျက်များက မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းလောက်အောင် ဇယ်ဆက်နေသည်၊ မာနယ်ပလော ကျသည်၊ ကျနော်တို့ဗဟိုလည်း ဆုတ်ပေးလိုက်ရသည်၊ ကျနော်တို့ရဲ့ ပင်မတပ်ရင်းအင်အား အများစုက KNPP (ကရင်နီပြည် တိုးတတ်ရေးပါတီ) ဒေသဘက်ကို ပြောင်းရွှေ့သွားရပြီ၊ ကိုတိုက်မောင်းနှင့် အပါအ၀င်ကျနော်တို့ တပ်စိတ်တစိတ်ကျန်ခဲ့သည်၊ အလယ်ပိုင်းဒေသကို ထွက်ခွာရန်၊ ကျနော်တို့မသွားဖြစ်၊ ကိုတိုက်မောင်း ကွယ်လွန်သည်၊ (၂၆ – ၄ – ၉၅) နှမြောတသမှုတွေမှ အနည်မထိုင်သေး အလယ်ပိုင်းအလုပ်အဖွဲမှ ကြေးနန်စာရောက်လာသည်၊ “ရဲဘော် ကြည်ဆန်းအား ရန်သူမှ လက်ရဖမ်းမိ” (၂၈ - ၉ – ၉၅) နှစ်ရက်သာကြာသည်၊ နောက်ထပ်ကြေးနန်း၊ “ရဲဘော်ကြည်ဆန်း ယနေ့ပင် ကျဆုံး” (၃၀ – ၉ – ၉၅) သွားပြီ၊ ကျနော့်အချစ်တွေ အဆုပ်လိုက်ကြွေ၊ လွတ်မြောက်ရေးဗဟို။ တော်လှန်ရေးဆုံရပ်။ တော်လှန်စစ်ရဲ့ ကွပ်ကဲရေးဌာန။ မိမိဗဟို။ မိမိတပ်ရင်း။ လေးစားအားထားရသည့် တပ်မှုး။ ညီရင်းအကိုလို ချစ်ခဲ့ရသော နောင်တော်ရဲဘော်ကြီး၊
ကျနော့်ရဲဘော်ကြီး ရန်သူ့လက်အတွင်း အသက်ရှင်လျက်ဆင်းသက်ခဲ့ရသည့် နှစ်ရက်တာခရီး၊ ဖြစ်ကာစမှာတော့ သိုးသိုးသန့်သန့်၊ စက်လိုင်းပေါ်မှ စကားများ၊ သိပ်တော့ဖြင့် ရုပ်လုံးမကြွ၊ မပီပြင်သေး၊
နောက်တော့ အလယ်ပိုင်းအလုပ်အဖွဲ့မှ ဗဟိုသို့ပြန်လာကြသူများ ရောက်လာသည်၊ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လဲ ထိုဒေသကိုရောက်သွားဖြစ်ခဲ့သည်၊ ပီပြင်လာပြီ၊ ရုပ်လုံးကြွလာပြီ၊ ကြားရသည့်သတင်းများက ကြက်သီးပင်ထမိသည်၊
“သူရဲကောင်းဆန်ခဲ့တယ်” “တော်လှန်ရေးသမားပီသတယ်” “ဒေသခံလူထုအားလုံးက စုပ်တသပ်သပ်နဲ့ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြတယ်” “ရန်သူတွေ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သွားခဲ့ရတယ်” သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အနှစ်ချုပ်၊ ကြည့်စမ်း၊ တော်လှန်တဲ့သူရဲကောင်းတယောက် ကိုယ်အနီးအနားမှာ ကိုယ်နဲ့အတူတူရှိနေခဲ့တာ၊ ဂုဏ်ရောင်ပြောင်ခဲ့ပါတယ် ရဲဘော်ကြီး၊
ရန်သူက သူ့ကို ကျွဲကျအောက်ရွာနှင် လှည်းစခန်းရွာအကြားတွင် ဖမ်းမိသွားခြင်းဖြစ်သည်၊ သူနဲ့အတူ ရဲဘော်ရဲထိုက် (အဘ)လည်းပါသည်၊ ရဲဘော် ရဲထိုက်ကထိုနေရာတွင်ပင် ကျဆုံးသွားသည်၊ သူ့ကိုတော့ အရှင်မိသွားသည်၊ ၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ကန်ကျောက်ပြီး တုတ်နှောင်ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်၊ ပြောခဲ့ပြီးသလို ထိုဒေသက ရန်ဝင်။ ငါဝင်ဒေသ၊ တဖက်နှင့် တဖက် အပြီးတိုင်ဖယ်ရှားရေးအတွက် လူထုအားကို ထူထောင်ရသည်၊ တော်လှန်ရေးအပေါ် ထောက်ခံသည့် လူထုကို အခိုင်အမာအင်အားစုဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ရသည်၊ ထိုကိစ္စကို အရပ်ဝတ်ဖြင့် လှုပ်ရှားသွားလာနေသည့် သူအပါအ၀င် အလုပ်အဖွဲ့များက အသိဆုံး၊
သူ့ကို ရန်သူက အရှင်မိသွားတော့ အကြီးအကျယ် စစ်ဆေးတော့သည်၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီတိုကလွဲပြီး အ၀တ်အားလုံးကို ချွတ်သည်၊ ကြိုးနဲ့တုတ်ပြီး ထိုးကြိတ်ကန်ကျောက်ကြသည်၊ ခါးပတ်နှင့် ရိုက်သည်၊ သေနက်ဒင်နှင့် ထုကြပြီး လူထုနှင့် တော်လှန်ရေးကို သစ္စာဖေါက်အောင်လုပ်ကြသည်၊ မရ၊ ရွာစဉ်လှည့်ပြီး ရွာထဲက တော်လှန်ရေးသစ္စာခံ လူထုအမာခံများကို ဖေါ်ထုတ်ခိုင်းသည်၊ သူလုံးဝမပြော၊ သူ့ကို ဓါးဖြင့်မွှမ်းသည်ဟုပင်သိရသည်၊ အံကြိတ်ခံခဲ့သည်၊ ရန်သူကို သူပြောတဲ့စကားတွေက “မသိဘူး” “မရှိဘူး” “ငါကိုသတ် ဘာမှမပြောဘူး” လူထုနှင့် တော်လှန်ရေးသစ္စာကို အသက်ထက်တန်ဖိုးထားခဲ့သည်၊ ဖြစ်သမျှကိစ္စမှန်သမျှကို သူတဦးတည်း ခါးစီးခံခဲ့သည်၊ တော်လှန်သော တာဝန်ခံစိတ်ဓါတ်။ မှန်ကန်သော လူထုအတွေးအခေါ်။ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ လူထုကို အလုပ်အကြွေးပြုရေး လမ်းစဉ်၊
ကြည့်နေကြရသည့် လူထုထဲမှာ သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိနေသည်၊ သူလည်းသိသည်၊ သို့သော် ဘယ်လိုပင်နှိပ်စက်ပါစေ သူတို့ကို ယောင်လို့တောင်မှ လှည့်မကြည့်၊ တကိုယ်လုံး ယောင်ကိုင်း။ ညိုမည်း။ သွေးအလိမ်းလိမ်း၊ မြင်ရသူတိုင်း နှလုံးသည်းပွတ် ဆွဲယူလွှင့်ပစ်ခံရသည့်ပမာ နာကျင်ကြေမွ၊ သူကို မြင်မိသူတိုင်း ငိုမိကြ၊ လူစိတ်မရှိတဲ့ စစ်ဝါဒီတွေကို အသည်းနာမိကြ၊ “တော်တော့်ကို လူမဆန်အောင် နှိပ်စက်လိုက်ကြတာဗျာ။ အဲဒီကောင်တွေ လူမှဟုတ်သေးရဲ့လားလို့တောင် စဉ်းစားကြည့်မိတယ်၊ ကျနော်ဆိုရင် သူ့ကိုကြည့်ရင်း တော်တော်စိတ်ထိခိုက်လာလို့ ဖေါ်ချင်လည်းဖေါ်ပါစေဆိုပြီး သူနဲ့တည့်တည့်မှာသွားရပ်နေတာ၊ ကျနော့်ကိုလည်း တွေ့တယ်၊ လုံးဝကို ဖေါ်မသွားဘူးဗျာ၊ ဒီလောက်သစ္စာရှိပြီး သတ္တိရှိတဲ့လူမျိုး လုံးဝမတွေ့ဖူးသေးဘူး၊” ဟူ၍ သူ့မိတ်ဆွေတဦးက ကျနော့်ကို ပြောပြသည်၊
အဆုံးတွင်တော့ ရန်သူလက်လျော့သွားရသည်၊ လူထုကိုသစ္စာခံပြီး ရန်သူကို ထီမထင်ခဲ့သူ။ သံဓိဌာန် ပြတ်သားသူ။ အခက်အခဲကို စိန်ခေါ်ရဲသူ။ အသက်စွန့်ရန် ၀န်မလေးသူကို ရန်သူ အရှုံးပေးလိုက်ရသည်၊ သေမိန့်၊ သေခြင်းကိုတောင်းခံနေသူအတွက် သေမိန့်သည် တုန်လှုပ်စရာမဟုတ်၊ ဆုလာဒ်၊ ရန်သူတောင်းဆိုသည့် သတင်းကိုသူကမပေး၊ သူတောင်းဆိုသည့် သေမိန့်ကိုသာ ရန်သူက ပေးလိုက်ရသည်၊
ရန်သူက သူ့ကို လက်ခုတ်ထဲက ရေလို့ထင်ခဲ့သည်၊ ထိုထင်မြင်ချက်ကို သူ၏ ကိုယ်ကျိုးစွန့်တိုက်ပွဲဝင်ရဲသည့် သတ္တိက တော်လှန်ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ခဲ့သည်၊ ရန်သူတို့ ကြောက်ဒူးတုန်ခဲ့ရပြီ၊ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် သူ့ကို တာဝန်ခံနှိပ်စက်ခဲ့သူ တပ်ကြပ်ကြီးမှာ စိတ်ချောက်ခြားပြီး စိတ္တဇဆေးရုံသို့ ပို့လိုက်ရသည့်သတင်းက ဖုံးမရအောင် ပွင့်ထွက်လာသည်၊
ရဲဘော် ညိုထွန်းအောင်က ရန်သူ၏ လူမဆန်သော ရက်စက်မှုကြားမှ ယုံကြည်ချက်ကို အလံထူရင်း ဂုဏ်ရောင်ပြောင်စွာ ကျဆုံးခဲ့ရပြီ၊ သို့သော် တန်ဖိုးရှိသော...၊ သူ၏တန်ဖိုးနှင့် ဂုဏ်ပုဒ်တွေကို ပြန်ပြောင်းတသ ဂုဏ်ယူမိဖြစ်ရင်းမှ သူကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့သည့် ကဗျာတပုဒ်က ကျနော့်ရင်ထဲ တလှပ်လှပ်တိုးဝင်လာတော့သည်၊
သစ္စာရှာဖို့ “ငါ” မြင်းစီးတယ်တဲ့၊
ဟုတ်ပါတယ် ကိုညိုထွန်းအောင်၊ ရဲဘော်ကြီးဟာ မြင့်မြတ်စွာတိမ်ကိုစီးပြီး သစ္စာခရီးထွက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ၊ ဒါဟာ သစ္စာတရားက တိမ်သားတိမ်ဆိုင်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး ရဲဘော်ကြီးကို သူရဲကောင်းဗိမ္မာန်ဆီ ခရီးနှင်နေတာပါ၊ အဖိနှိပ်ခံတို့ရဲ့ သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းမှာ ရဲဘော်ကြီးဟာ ပြန်တမ်းဝင်ခဲ့ပါပြီ၊ အဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာပင် တော်လှန်ရေးကို သစ္စာခံ။ လူထုကို အလုပ်ကြွေးပြု။ ရန်သူအပေါ်ပြတ်သား ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရဲတဲ့စိတ်ဓါတ်၊ အဲဒီစိတ်ဓါတ်ဟာ ဦးညွှတ်အပ်တဲ့ “ညိုထွန်းအောင် စိတ်ဓါတ်”
Posted by ဖိုးညို at 7:02 PM 1 comment:
ညီမလေး mirror ကို ပေးတဲ့ နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင် (သို့) သူ Tag တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်
ဖြစ်စဉ်အတွင်းက တိမ်လိပ်တွေဟာ လေနှင်ရာလွင့်ဝဲရင် ကျနော့်ခေါင်းပေါ်မှာ ပျံဝဲနေတယ်။
ခေတ်ကြီးကိုက ကတိမ်းကပါးဖြစ်လေတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆုံတွေ့မှုဟာလည်း ကတိမ်းကပါး ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့နေတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး တံတိုင်းအဟောင်းကြီးကို ရိုက်ချိုးရင်း
ကျနော်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ ရွှေရောင် တောက်ပခဲ့တယ်။
ကျနော့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာ အဟောင်းအမြည်းလေးကိုရော၊
ညီမ ထိုင်လေ့ရှိတဲ့ အင်တာနတ်ဆိုင်ကလေးကိုရော၊
သူ့ဘာသာ ကောင်းကင်ထဲမှရှိနေတဲ့ ရေဒီယိုလှိုင်းတွေကို ကြွင်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးချသွားခဲ့တဲ့
ဂျီတော့ စာရိုက်ဘားကလေးကိုပါ ကျေးဇူးတင်လှပါတယ်။
တို့တတွေရဲ့ ဆုံတွေ့ခြင်းဟာ ပုလဲလိုနေတဲ့ လယ်ကွင်းလိုပါပဲ။
ဒီအချိန်ကာလတွေဟာ ဘ၀နဲ့စာရင် ဘတ်စကားစီးရင်း မြင်လိုက်ရတဲ့ ကြော်ငြာကားချပ်လေးလို
ဘ၀ဆိုတာလည်း ခဏငယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အစုအဝေးကြီးပဲ မဟုတ်လား။
တို့တတွေ အဲဒီ ခဏငယ်တွေကို ကောက်သင်းကောက်သလို လိုက်ကောက်ရင်း
လရောင်အောက်က လေညှင်းမှာ မြစ်ဟာ ရင်ခုန်စွာ နိုးကြွလာတဲ့ ရေလှိုင်းကြက်ခွပ်လေးတွေကို လွမ်းတယ်။
လတာပြင် သောင်ကမ်း လူ့အသားဆွေးတွေနဲ့ ပြည်လျှမ်းနေတော့မယ်။
ဟော့ဒီ ဗွတ်ထနေတဲ့ ခေတ်ပြင်ထဲကို ငါးမြွေထိုးချိတ်တန်နဲ့ ချိတ်ချလိုက်လို့ ငါးမြွေထိုးပါလာသလိုမျိုး အလွမ်းတွေဟာ ဖြတ်ဖြတ်လူးရင်းပါလာခဲ့တယ်။
အဲဒီသံသရာထဲက ဟော့ဒီ့ ပဌာန်းဆက်ကိုတော့ အခန်းဆက် ၀ထ္ထုရှည်လေး ရေးလိုက်ချင်ပါသေးတယ်။
ညီမလေးရေ … ရော့
ဒါတွေအားလုံးဟာ ငါတို့နှလုံးသားရဲ့ အထက်မှာ ရှိနေလိမ့်မယ်။
ဒါက ကျနော် သူမအတွက် ရေးပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ပေးစာကို ပြန်လည်ဖေါ်ပြခဲ့တာပါ။
၂၁ ရာစုရဲ့ ကောင်းမွန်သောအချက်အလက်တွေထဲ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ညီအကို မောင်နှမ ဖြစ်ခွင့်ရခြင်းဟာ ရှေ့တန်းက ပါ ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ကောင်းကင်ယံမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေဟာ ၀ါဂွမ်းသား ငှက်ကလေးတွေလို အုပ်ဖွဲ့ပျံသန်းနေကြတယ်။
ဘလော့ခ် ညီအကိုတော်စိတ်ဓာတ် အဓွန့်ရှည်ပါစေ။
စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမြင်တခု ကျနော့်မှာ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၃ ရဲ့ ဝေမှိုင်းတဲ့ နှင်းရောင်တံတိုင်းတွေနဲ့ ရှမ်းရိုးမမှာပေါ့။
ဆရာဒဂုန်တာရာ ကဗျာပန်းချီချယ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မဲနယ်တောင်တန်းကြီးရှိရာကို သူပုန်လုပ်ဖို့ ကျနော် ဆိုက်ရောက်သွားတယ်။
ဒါဟာ ကျနော့်ရဲ့ သူရဲကောင်း ရဲဘော်ညိုထွန်အောင်ပြောသလို တိမ်ကိုစီးပြီး သစ္စာရှာတဲ့ခရီးပါ။
ဘ၀မှာ အမှန်ပါလို့ ယုံကြည်တဲ့တရားအတွက် ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုတွေကို အပြီးတိုင်ထည့်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ကြီး တခွဲသားနဲ့ပေါ့။
အဲဒီရည်မှန်းချက် အထမြောက် အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုကတော့ တဘ၀လုံး ထည့်ဝင်ရလိမ့်မယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်နေမိပါတယ်။
သြော် … ငါတက်ခဲ့တဲ့တောင်တွေကို ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ မာန နည်းနည်းမြင့်သွားတယ်။
ရှမ်း၊ ကယားနယ်စပ်ရဲ့ လွယ်ဖီတောင်တန်း သူပုန်စခန်းကနေ အဖေ့ကို စာတစောင်ရေးလိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။
အဖေက ကျနော်တောခိုမှာကို ကြိုသိပြီး မတားဆီးလိုက်နိုင်သူမဟုတ်လား။
အဲဒီစာက ကျနော် အောင်မြင်စွာ တောခိုလိုက်နိုင်ကြောင်း သတင်းပို့လိုက်တဲ့စာပါ။
အဲဒီစာမှာ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဟောဒီလိုရေးခဲ့ဖူးပါတယ် …
ကျနော်ဟာ အဖေပြောသလိုပဲ စိတ်ကူးယဉ်တက်တဲ့ ကောင်လေးတယောက်ပါ။
စိတ်ကူးယဉ်တယ်ဆိုတာ အနာဂတ်ကို ဇာတ်တိုက်တာလို့ ကျနော်က ယုံကြည်နေပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျနော် စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အလုပ်ကို သေသေချာချာလုပ်ခဲ့မိပါတယ်။
အခု အဲဒီစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းတွေကို ဇာတ်စင်ပေါ်ခင်းကျင်းပြသလိုက်ပါပြီ။
အဲဒီကစလို့ ကျနော်ဟာ သူပုန်ပြဇာတ်ကို အခန်းဆက် ကလာလိုက်တာ မိုးလင်းတယ်လို့ကို မရှိသေးပါဘူး။
ဇာတ်ပိုးထနေသူက ဇာတ်ကနေရရင် ပျော်သလိုမျိုး ….
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေသူကို ထောင်ထားခြားနားလိုတဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းဟာ ငါးပြား၊ ဆယ်ပြားတန် စိတ်ကူးယဉ်ချက်မှ မဟုတ်ပဲလေ။
ကျနော့်သွေးထဲဝင်နေတဲ့ အဲဒီ မုဒ တွေကိုပဲ တယုတယ ထွေးပွေ့ထားရင်း သူပုန်ဇာတ်ကို မိုးစင်စင်လင်းတဲ့အထိ က ရပါလိမ့်မယ်။
သူပုန်တယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ဟာ ဘာလည်း …
ကျနော်ရဲ့ အနုလုံ၊ ပဋိလုံ ဆိုတဲ့ကဗျာမှာ ကျနော့်ရဲ့သားကို တိုင်တည်ပြီး ဟော့ဒီလို ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဲဒီလို ကံနာ ၀ဋ်နာတွေနဲ့
ရူးသွပ်မှုကြီး ၂ ခုက ရှိသေးသကွယ့်။
တဘ၀စာ ထုဆစ်ခဲ့သမျှ ကဗျာတွေကို
ကျနော်တို့ဟာ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ သူပုန်ထ နေကြသူတွေပါ။
ဒါ့ကြောင့်လည်းပဲ တိုင်းပြည်ရဲ့ ရတနာဖြစ်တဲ့ ရွှေတီဂုံဘုရားမှာ ကျနော့်ရဲ့ ရတနာဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ကဗျာတွေကို ဌာပနာထားခဲ့ချင်တာပါ။
ကျနော်တို့ဟာ မှော်နဲ့ သူပုန်ထနေကြသူတွေပါ။
ဒါ့ကြောင့်လည်းပဲ သူပုန်မှော် အောင်ချင်ခဲ့တာပါ။
Posted by ဖိုးညို at 12:10 AM 1 comment:
ကျနော့်ရဲ့ စာမူလေးတွေကို စုတင်လိုက်ချင်လို့ပါ။ တနည်းအားဖြင့် ကျနော့်ရဲ့ ခေတ်မီ မှတ်စု စာအုပ်ပေါ့။
ဘားတိုက်ဆောက်ဖို့ ခုတ်လိုက်ပြီ။ ။
ဗဟိန်းထက် - ၅ - နှစ်ပြည့်ပြီ
ရဲဘော်ဗဟိန်းထက်ရေ … အဲဒီလို ကံနာ ၀ဋ်နာတွေနဲ့ ဒါဏ်ရာတွေပေပွနေတဲ့ မင်းအဖေမှာကလည်း ရူးသွပ်မှုကြီး ၂ ခုက ရှိသေးသကွယ့်။ တခုက တဘ၀စာ ထုဆစ်ခဲ့သမျှ ကဗျာတွေကို ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ဌာပနာထားချင်တဲ့ကိစ္စ၊ နောက်တခုက သူပုန်မှော်အောင်ချင်တဲ့ ကိစ္စ။
ညီမလေး mirror ကို ပေးတဲ့ နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင် (သို့)...
poems of the ladys (2)
ကျနော်ကြိုက်သော စာ ကဗျာများ (1)